Talata, Febroary 6, 2007 Douglas Karr
Navoaka tamin'ny Problogger ary tena mahafinaritra.
Raha tsy mahita ilay horonan-tsary ianao dia afaka mitsidika ilay tranonkala: KSU, Ethnography Digital
6 Mey 2007 tamin'ny 11:31 hariva
Wow, ity dia famaritana horonan-tsary tena tsara amin'ny Web 2.0. Vita tsara, mpampianatra!
Izany no izy namoaka ny "famaritana" ahy manokana an'ny Web 2.0 androany (talohan'ny nahitako ity horonantsary ity). Manaiky tokoa aho fa ny Web 2.0 dia mifandraika amin'ny fampifandraisana olona fotsiny, fa mihoatra izany. Izany dia ny demokrasia amin'ny Internet.